दैनिक राशिफल: वि.सं. २०७६ भदौ २२ गते आइतवार, ई.सं. २०१९ सेप्टेम्बर ८ - Sutra TV Sutra TV
दैनिक राशिफल: वि.सं. २०७६ भदौ २२ गते आइतवार, ई.सं. २०१९ सेप्टेम्बर ८
मेष : तपाईंको ऊर्जा स्तर उँचो हुनेछ। बुद्धिमानी तरीकाले निवेश गर्नाले मात्र लाभ हुनेछ, त्यसैले तपाईंले दुखले कमाएका पैसा राम्रो ठाउँमा निवेश गर्नु हुँदैछ भन्ने निश्चित गर्नुहोस्। तपाईं आफ्नो परिवारका सदस्यहरूलाई भनेको सबैमा सहमत हुनुहुँदैन, तर तपाईंले उनीहरूको अनुभवबाट सिक्ने प्रयास गर्नुपर्छ। तपाईं आज आफ्नो साथीको धुकधुकीसँग समन्वयन हुनुहुनेछ। हो, यो तपाईं प्रेममा हुनुहुन्छ भन्ने चिन्ह हो, तपाईंको अरूलाई बुझाउन सक्ने क्षमताले राम्रो लाभांश प्राप्त हुनेछ। तपाईंलाई आफ्नो सम्बन्ध त्याग गर्नु झैं लाग्ने धेरै झगडाहरू हुनेछन्। तर, त्यति सजिलै सम्बन्ध त्याग नगर्नुहोस्।
वृष : ध्यान र योग आध्यात्मिक साथै भौतिक लाभको लागि लाभदायी साबित हुनेछन्। अनुमान वा अनपेक्षित लाभ मार्फत वित्तीय स्थितिमा सुधार आउनेछ। यो आफ्नो तर्फबाट धेरै प्रयास नगरिकन अरूको ध्यान आकर्षित गर्ने राम्रो दिन हो। प्रेम असीम छ, प्रेम असीमित छ, तपाईंले अघि पनि यी कुराहरू सुनेको हुनुपर्छ। तर आज, तपाईंले यसलाई अनुभव गर्नुहुनेछ। आज अनुकूल ग्रहहरूले खुसी महसुस गर्ने प्रशस्त कारणहरू ल्याउनेछन्। विवाह पछिको प्रेम गाह्रो झैं लाग्छ, तर यो दिनैभरि तपाईंलाई भइरहेको छ।
मिथुन : तपाईंमा धार्मिक भावना उत्पन्न हुनेछ जसले गर्दा तपाईंलाई साधु, संतहरूबाट केही ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त गर्न धार्मिक स्थलको भ्रमण गर्ने मन लाग्नेछ। बुद्धिमानीपूर्वक लगानी गर्नुहोस्। पुराना साथीहरू समर्थक र सहयोगी हुनेछन्। के तपाईंले कहिल्यै अदुवा र गुलाबसँगको चकलेट सुँघ्नुभएको छ ? तपाईंको प्रेमी जीवन आज त्यस्तै स्वादिलो हुनेछ। आफ्नो प्रतिष्ठामा हानि गराउने मान्छेसँगको सङ्गत गर्न रोक्नुहोस्। यो आफ्ना जोडीसित तपाईंको रमाइलो दिन हुनेछ।
कर्कट : असुविधाले तपाईंको मानसिक शान्तिमा बाधा दिन सक्छ तर एउटा मित्र तपाईंको समस्या समाधान गर्न अत्यन्तै उपयोगी हुनेछ। तनाउ हटाउन केही मन्द संगीत सुन्नुहोस्। सफलताको लागि आजको सूत्र नवीन विचारधारा र राम्रो अनुभव भएका मानिसहरूको सल्लाहमा आफ्नो पैसा राख्नु हो। भाइ वा बहिनीले तपाईंको सल्लाह लिन सक्छन्। तपाईंको प्रेमीकासँग केही भेद उत्पन्न हुन सक्छ, तपाईंले आफ्नो जोडीलाई आफ्नो स्थिति बुझाउने प्रयास गर्न गाह्रो पर्नेछ। आज तपाईं पूर्ण रूपमा राम्रो विचारको हुनुहुन्छ र तपाईंका रुचिका गतिविधिहरुले आफुले आशा गरेभन्दा धेर लाभ गराउने छन्। आफन्तको कारणले आज झगडा हुने सम्भावना छ, तर दिनको अन्त्यमा सबैको राम्रोसँग समाधान हुनेछ।
सिंह : आज स्वास्थ्य ठीक हुनेछ। तपाईंमा छिट्टो पैसा कमाउने इच्छा हुनेछ। तपाईंका प्रियजनहरूसँग तपाईंको सम्बन्ध बिग्रिने मुद्दालाई बढ्न नदिन सक्ने सबै भन्दा सही मान्छे तपाईं हुनुहुन्छ। तपाईंको ऊर्जाको स्तर उच्च हुनेछ, किनकि तपाईंको प्रियले धेरै आनन्द लिएर आउनेछ। आज तपाईंले महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ। एउटा सानो प्रयासले, आजको दिन तपाईंको वैवाहिक जीवनको सबैभन्दा राम्रो दिन बन्न सक्छ।
कन्या : डरको डरलाग्दो राक्षससँग लड्न आफ्नो विचारमा केही सकारात्मक सोच राख्नुहोस्, अन्यथा तपाईं यो कट्टर भूतको निष्क्रिय र बेरहमी सिकार बन्नुहुनेछ। एउटा नयाँ आर्थिक सम्झौता तय हुनेछ र नयाँ पैसा प्राप्त हुनेछ। तपाईं यसको लागि बाहिर जानु पर्ने भए तापनि, छोराछोरीसँग आनन्द मनाउन आफ्नो खाली समय खर्च गर्नुपर्छ। आज तपाईंलाई जीवनमा साँचो प्रेमको सम्झना आउँछ। चिन्ता नगर्नुहोस्, समय अनुसार सबै कुरामा परिवर्तन आउँछ, तपाईंको रोमान्टिक जीवन पनि त्यस्तै हो। तपाईंले कसैलाई दिएको सहायताको इनाम वा स्वीकार प्राप्त हुनेछ यसैले आज तपाईं सबैको प्रसंशाको पात्र हुनुहुनेछ। तपाईंको कार्य व्यस्तताको कारणले तपाईंको जोडीले तपाईंको इमानदारी प्रति शङ्का गर्न सक्छ, तर दिनको अन्त्यमा उनले कुरा बुझेर तपाईंले अंगाल्ने छन्।
तुला : तपाईंको शारीरिक रोग आराम हुने धेरै सम्भावना भएकोले खेल प्रतियोगितामा भाग लिन सक्षम हुनु हुनेछ। धेरै लाभदायक दिन होइन, आफ्नो पैसाको अवस्था जाँच गरेर आफ्नो खर्च सीमित गर्नुहोस्। परिवारका सदस्यहरूसँग केही तनाउमुक्त समय बिताउनुहोस्। प्रेम र रोमान्सले तपाईंलाई आनन्दित मुडमा राख्ने थिए। असीम रचनात्मकता र उत्साहले तपाईंको अर्को फाइदाजनक दिन आउँछ। आज तपाईं विवाहित भएको कारण आफैंलाई भाग्यशाली महसुस गर्नु हुँदैछ।
वृश्चिक : तपाईंको मुस्कान निराशा विरुद्धको समस्या रोक्ने झैं काम गर्नेछ। लामो अवधिको दृष्टिले लगानी गरिनु आवश्यक छ। तपाईंले परिवारका सदस्य र साथीहरूसँग पर्याप्त समय पाउनुहुनेछ। तपाईंका जोडीको स्वास्थ्य नराम्रो हुनाले आज प्रेममा बाधा पर्नेछ। तपाईंलाई सबैभन्दा गर्न मन लाग्ने कुराहरूको सामाजिकरण र पालनको लागि आज समय छ। आफन्तहरूले आज तपाईंको जोडीसित तर्क गर्न सक्छन्।
धनु : समय व्यस्त भए तापनि स्वास्थ्य राम्रो रहनेछ, तर आफ्नो जीवनलाई सहज नलिनुहोस्, जीवनको हेरविचार वास्तविक भाकल हो भन्ने महसुस गर्नुहोस्। तपाईंले केही अतिरिक्त पैसा बनाउने तरिकाहरू खोजिरहनु भएको छ भने सुरक्षित वित्तीय योजनाहरुमा लगानी गर्नुहोस्। सामाजिक गतिविधिहरुमा मजा हुनेछ तर तपाईंले अरूसित आफ्नो रहस्य साझा नगर्नुहोस्। यस दिनलाई एउटा विशेष दिन बनाउन थोरै प्रेम र दया दिनुहोस्। आज तपाईंले आफ्नो मनको जाँच गर्नु हुनेछ, तपाईंहरू कसैले चेस, क्रोसवर्ड खेल्न लाग्नुहुनेछ भने कसैले कथा कविता लेख्नु हुनेछ वा भविष्यको बारेमा केही योजना बनाउनुहुनेछ। तपाईंको जोडीले प्रारम्भिक चरणका प्रेम र रोमान्सको रिविन्ड बटन दबाउनेछ।
मकर : अरूको आवश्यकता तपाईंको इच्छासँग तपाईंलाई हेरचाह गर्न हस्तक्षेप गर्नेछ, आफ्ना भावनाहरू नरोक्नुहोस् र आराम गर्नको लागि तपाईंले चाहेका कुराहरू गर्नुहोस्। हतारमा निवेश नगर्नुहोस्। यदि निवेश गर्दा तपाईंले सबै सम्भव कोणबाट हेर्नु भएन भने घाटा निश्चित छ। तपाईंको आवश्यकताहरूको लागि तपाईंको भाइ तपाईंले सोचे भन्दा अझ बढी सहयोगी हुनेछ। प्रेमले सकारात्मक चटक देखाउने छ। आज तपाईंले महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ। तपाईंलाई आफ्नो जोडीले विशेष ध्यान दिन सक्ने सम्भावना देखिन्छ।
कुम्भ : आफ्नो ऊर्जा संकटमा परेका कसैको मद्दत गर्न प्रयोग गर्नुहोस्। याद राख्नुहोस, अरूको लागि कुनै प्रयोगमा आएन भने यो नश्वर शरीरको प्रयोजन छैन। तपाईंले जानेका मानिसहरूको माध्यमबाट आयका नयाँ स्रोतहरू उत्पन्न हुनेछन्। आज सामाजिक कार्यहरुमा उपस्थित हुने मौका पाउन सक्नुहुन्छ, जसले गर्दा तपाईं प्रभावशाली मान्छेको सम्पर्कमा आउन सक्नुहुनेछ। तपाईंले प्रेमको पीडा अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ। केही कानुनी सल्लाह लिनको लागि वकीलसँग भेटघाट गर्ने राम्रो दिन। आफ्नो छिमेकीले तपाईंको वैवाहिक जीवनमा समस्या बनाउने प्रयास गर्न सक्छ, तर यसले तपाईंहरूको प्रेमको बन्धन हल्लाउन गाह्रो छ।
मीन : तपाईंले आराम गर्न सक्ने दिन हो। तपाईंका मांसपेशीलाई राहत दिन तेलले आफ्नो शरीरको मालिश गर्नुहोस्। तपाईंले कमीशन, लाभांश वा रोयल्टीहरूबाट लाभ प्राप्त गर्नु हुनेछ। तपाईंले समयमा गरेको मद्दतले कसैको जीवन बचाउन सक्छ। समाचारले तपाईँको परिवारका सदस्यहरूलाई गर्व हुने र तिनीहरूलाई प्रेरित पनि गर्नेछ। रोमान्सका लागि अवसर स्पष्ट छन् तर छोटो समयको लागि हुनेछन्। तपाईं परिस्थितिबाट भाग्नु भयो भने, त्यसले तपाईंलाई साह्रै नराम्रो तरिकाले पछ्याई रहनेछ। तपाईंको वैवाहिक जीवनमा आज सबै खुसी देखिन्छ।